XOG: Guddiga khilaafaadka oo kursiga beesha CELI/MARREEXAAN xukmiyey – Kismaayo24 News Agency
XOG: Guddiga khilaafaadka oo kursiga beesha CELI/MARREEXAAN xukmiyey
by admin 5th December 2016 5th December 2016 0110
Kadib markii muran uu soo kala dhexgalay maamulka Galmudug iyo beesha Celi/Marreexaan oo ku aadan kursiga ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi u gudubtay guddiga khilaafaadka doorashada.
Waxaana guddigan uu dacwada ka dhageystay dhinacyadii isku hayey kursiga oo kala ah beesha Celi oo uu la socday Ugaaska Marreexaan Ahmed Barre Ali “Taakooy” iyo Maamulka Galmudug oo ay ugu horeeyaan Abdikariim iyo Maxamed Xaashi, kuwaasi oo jufo kale oo marreexaan oo dhalasho kala dhexeyn Celi u raba boobka kursigan.
Guddiga oo ka duulaya xaqiijinta cida xaqa leh ayaa tixraac ku sameeyey cida kursigan ku fadhisay 16 sano oo ay dowlada Soomaaliya dhisneyd. Sidoo kale, baaray inuu wax dood ah labadan reer horey soo dhexmartay iyo inaysan jirin arrintaasi. Taasi oo ay waayeen meel ay kasoo dhacday, balse ay jirto inay reer Siyaad Xuseen ay dhowr jeer oo hore kursiga ku qabsadeen reer Ugaas Sharmaarke, oo ah reer Diini.
Waxaana intaasi xigtay inay saddexda odey dhaqameed ee ugu jira beesha Marreexaan saxiixayaasha 135 ah, ee jooga Galmudug inay wax ka weydiiyeen kursiga cida leh, kuwaasi oo si wadajir ah u cadeeyey in kursiga ay iska leeyihiin beesha Celi/Marreexaan. Halka reer Siyaad Xuseen iyo maamulka Galmudug ay ku socdaan wado qardo-jeex ah oo wax natiijo ah laheyn ama abuurista inay isku dhacaan dadka deegaanka.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa ku dhisan nidaamka 4.5, kaasi oo ah qaab isir ama wada dhalasho, sidaasi darteed reee Siyaad Xuseen waxay dhalasho ayaan la wadaagaan Xuseen Yusuf, ee lama aysan dhalan Celi, taasi oo muujineysa inaysan waxba wada laheyn. Sida ku cad shaxda hoose:
Ugu danbeyntii guddiga khilaafaadka oo tixraacaya cadeymaha iyo go’aanada Ugaaska Marreexaan waxaa uu soo saaray xukunka sheegaya inay beesha Celi/Marreexaan leedahay kursigaasi, sidaasi darteedna uu maamulka Galmudug iyo guddiga doorashada aqbalaan in ergada iyo musharixiinta noqdaan beesha Celi oo kaliya.
Markii uu go’aankaasi soo baxay ayaa madaxda Galmudug bilaabeen inay irdaha u laabaan xafiiska guddiga khilaafaadka Galmudug, islamarkaana ay si cad uga horyimaadeen go’aankaasi iyo kan Ugaaska Marreexaan ahba. Lamana yaqaan wadada ay ku socdaan ee dhaca kursiga ah inay u suurtageli doonto.
WAA KAN XUKUNKA CELI KA HELAY GUDDIGA KHILAAFAADKA :
XOG:- Madaxda Itoobiya iyo Imaaraadka oo kulmay(sawirro)
TOP NEWS: Waxbadan ka Ogoow Socdaalka Xasan Shiikh ee Maanta uu ku tagay Magaalada Kismaayo
Warbaahinta Kismaayo24 oo dib u bilaabaysa waraysiyo aad u xiiso badan oo u gaar ah.
Banaan bax saakay ka dhacay qeybo kamid ah magaalada Muqdisho
Uganda oo canshuureysa dadka isticmaala baraha bulshada